Weerrarkii Munich siduu u saameeyay Soomaalida? - iftineducation.com
Weerrarkii Munich siduu u saameeyay Soomaalida?
iftineducation.com – Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka, Thomas de Maiziere, ayaa booqday goobtii uu ka dhacay toogashadii Jimcaha ee magaalada Munich, halkaasi oo nin hubeysan uu ku dilay 9 qof.
Waxa uu sheegay in uu halkaa la yimid muragada dhammaan dadka Jarmalka.
Inta badan dadka dhintay ama dhaawacmay ayaa ah dhalinyaro.
Booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in ninka weerarka geystay, oo ahaa 18 jir, kaasi oo warbaahinta maxaliga ah ay ku magacawday Cali David Sonboly, uusan wax xiriir ah la lahayn kooxda isku magacawday Dowladda Islaamiga ah.
Haddaba arrintan qaabkee u saameysay Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi?
Sahra Caydiid waa gabar Soomaliyeed oo ku nool magaalada, Farankfort, ee dalka Jarmalka, weriyaha BBC Cabdiraxamaan Bidhaan ayaa weydiyey bal sida ay dareemayaan Ajaaniibta dalkaasi ku nool.
DAAWO OO KA BARO GADHAN: XAASKAAGA HADEY GALMADA KUU DIIDO SIDAAN U FARSAMEEY.